Ụlọ - Nabata na ụlọ nyocha Genimal Biotechnologies
Chọọ nyocha DNA. Pịnye ihe atụ DNA mmekọahụ
Chọọ ozi. Pịnye ihe atụ buccal swab
Soro ma ọ bụ nweta nsonaazụ. Pịnye ihe atụ 250256
Lee nnwale DNA niile Nnwale DNA maka nnụnụ
Parasites intestinal ỌH NEWR.
Ahụike mkpọnwụ nke Laryngeal LP ỌH NEWR.
Ọrịa Myositis nke MMA ỌH NEWR.
Na-adịbeghị anya ozi ọma
Nnọọ na GENIMAL
Anyị na-enye azịza nnwale DNA ọhụrụ maka ọrụ ndị na-azụ anụ. Anyị ga-ahụ na ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma mgbe niile. Anyị na-atụ anya na ọ ga-atọ gị ụtọ inye anyị nyocha DNA gị.
Nye iwu nyocha DNA
Nweta nsonaazụ m
Sochie ule DNA m
Ihe kacha anyị mkpa bụ ịnye ọrụ na-enweghị atụ, nke kacha elu. Site na usoro arụ ọrụ akpaka zuru oke, Genimal na-akpachara anya na inye nsonaazụ kacha mma na nke ziri ezi enwere ike n'ihi usoro ya nke ọgbara ọhụrụ.
Mee ka nsonaazụ gị dị ngwa
Daalụ maka roboti nyocha akpaaka anyị, anyị na-ebute nsonaazụ na a obere oge.
Ọrịa na-efe efe : 1-3 ụbọchị
Ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa, Colotest: 1-6 ụbọchị
DNA mmekọahụ: 1-3 ụbọchị.
Ọnụ ahịa kacha mma
Anyị na-eme ike anyị niile iji nye gị kacha mma ahịa na nyocha DNA ọ bụla. Maka ndị na-azụ anụ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nyocha, anyị na-enye ruturu.
Asambodo DNA echekwara
Asambodo DNA anyị niile na-abịa na koodu nkwenye mebie.
Ịkwụ ụgwọ na 3X n'efu
Ịkwụ ụgwọ na 3x n'efu bara uru maka ịzụrụ ihe ọ bụla site na 79 €.
nsochi kacha mma
Email akpaaka mgbe ị natachara ihe nlele gị. Nleba anya n'ezie maka ọganihu nke nyocha gị. Ịnweta asambodo DNA gị na-adịgide adịgide.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ule anyị niile dị na nhọrọ awara awara. Site na ibu ụzọ nyocha gị, anyị na-ekwe gị nkwa igbu oge kacha mma
Budata nsonaazụ nyocha gị n'ihe karịrị asụsụ 117 iji kwado mgbanwe n'etiti mba.
Nye iwu otu ngwungwu DNA ugbu a ka ị nweta ọnụ ahịa ka mma wee zipu sample gị n'oge dị iche iche n'ime oke nke afọ abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike izipu ihe nlele 2 echi, 3 ọzọ n'ime ọnwa abụọ wdg.
Achọrọ m ịtụ maka nyocha DNA maka nke m
Nnwale DNA anyị mepere emepe ikpeazụ
LPN2 Polyneuropathy ụdị 2 na Leonberger
Nnwale DNA ọhụrụ: LEMP na Leonberger
Nnwale DNA ọhụrụ: IMM n'ime Horse Quarter
Dị ka ihe ị na-ahụ?
Hụ ozi ndị ọzọ
Nnwale DNA dị
A na-enyocha DNA
Oke mkpuchi anyị
Chọpụta ezigbo ndozi na nyocha DNA
Gaa ịzụ ahịa
Ka o si arụ ọrụ
Usoro ọrụ anyị dị nnọọ mfe…
Nye iwu nyocha DNA ma deba aha anụmanụ gị n'akwụkwọ
Anyị ga-ezitere gị ngwa nchịkọta gị ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike iji nke gị.
Chịkọta ihe nlele gị wee ziga ya n'ụlọ nyocha anyị
Nweta nsonaazụ gị ngwa ngwa site email, ozi nzi ozi, SMS wdg.
Chọpụta akụkọ a zuru ezu na ọkwa dị iche iche nke usoro.
Biko tinye gị email
Adreesị email a ezighi ezi
Anyị edebanyela aha gị nke ọma na akwụkwọ akụkọ anyị
Idenyela aha na akwụkwọ akụkọ anyị
Ozi kacha mma
Gwa akụkọ banyere akụkọ kachasị ikpeazụ
Mee ka ị mata maka ule DNA kachasị nke mepụtara
Gwa gị maka onyinye nkwalite
Soro na mmemme nyocha anyị
Ogo bụ ihe kacha anyị mkpa
Ndị ọrụ anyị zụrụ azụ nke ukwuu na-eji teknụzụ narị afọ nke 21 kachasị elu iji gboo mkpa kpọmkwem nke ule DNA ọ bụla.
Genimal Biotechnlologies nọgidere na-etinye ego n'ọdịniihu nke nyocha DNA site na ịzụrụ ngwa ngwa. Anyị na-eji robots bio akpaaka nke na-enye ọrụ pụtara ìhè yana nsonaazụ ziri ezi maka ule DNA niile anyị na-eme.
Genimal Biotechnologies nwere ihe karịrị 10000 ndị ahịa na ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ n'ụwa niile na-arụ ọrụ na anyị bụ ndị anyị na-enye ndị kasị pụta ìhè na ahaziri ọrụ.
Sonyere anyị !
Genimal na-arụsi ọrụ ike na mmepe nke nyocha DNA ọhụrụ, tumadi na ngalaba nke ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa na nkịta, nwamba na ịnyịnya.
Usoro enyi na enyi Eco
Genimal na-agba mbọ ịmepụta ụkpụrụ ọhụrụ nke na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi. A gbahapụrụ Ethidium bromide (nyocha nucleic acid) maka ngwaahịa ndị na-adịghị egbu egbu. Ngwaahịa mmeghachi omume belatara ọkara n'ime afọ 10.
Ụzọ ọgbọ na-abịa
Usoro nyocha DNA anyị niile na-eji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma n'ụzọ ọgbọ ọhụrụ na-ekwe nkwa nsonaazụ ntụkwasị obi na ngwa ngwa (mgbe 1 ụbọchị).
Ichebe anụ ọhịa
Genimal na-etinye aka na mmemme nyocha gbasara nchekwa anụ ọhịa na ebe obibi ya. Anyị na ndị ONCFS na-arụkọ ọrụ na mmemme dị iche iche yana ogige ntụrụndụ anụmanụ.
N'ihi teknụzụ ọhụrụ, GENIMAL etolitela Nhọrọ EXPRESS. Ọ bụ ihe ịtụnanya ngwa ngwa nhọrọ na-ekwe nkwa arụpụta na kacha nso oge kwere omume.
Ọrịa na-efe efe 24h
Ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa na agba ule 72h
Ọgbọ Express Protocol na-abịa n'ụzọ na ọtụtụ n'ime ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa ga-adị na 24h n'ọdịnihu dị nso.
Nleba ule DNA ozugbo
Mara mgbe niile ọganihu nke nyocha ya.
Gaa na usoro nsochi
Ijikọ ule DNA na nchekwa
Asambodo DNA anyị niile nwere a koodu nchekwa. Koodu a anaghị egbochi ya.
Lelee asambodo m
Webụsaịtị anyị nwere nchebe zuru oke yana echekwara ịnweta data gị niile.
Ndị ahịa anyị na-ekwu gbasara anyị
Home N'ozuzu fim: ★★★★★ 4.9 dabere na Nkọwa nke ụdị Ragdoll nyocha.
Hụ nyocha niile
Ikike niile echekwabara, Jenụala biotechnologies© 2022